Qasab ku-dhaca caarada leh lightweigh.
Daboolid qoto dheer oo kalsooni leh.
Shabakadda featherweight ee xargaha giijisan.
Nooca alaabta Koofiyadda magaalooyinka
Lambarka Moodalka Koofiyadda magaalada VU102
Teknolojiyada EPS + PC-in-caaryada leh jilicsan jilicsan
Muuqaalka khafiif ah, rakibida madaxa raaxada, naqshadeynta moodada
Kordhi fursadaha Visor saari karo
Koofiyadda magaalada waxay bixisaa qaab casri ah oo leh tiknoolajiyad difaac madaxeed oo horumarsan, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon qaab nololeedkaaga socodka. Qolofka ku jira-Qaab-dhismeedka ayaa ka caawiya ilaalinta wanaagsan ee waddooyinka.
Muuqaal muuqaal-koofiyad baaskiil laga saari karo oo xoojinaya qaabkaaga adigoon wax u dhimin hawo-qaadashada. Waxay ka kooban tahay naqshad qaab-hooseeya oo lagu rakibo muuqaal xariif ah si looga caawiyo wadayaasha magaalooyinka iyo kuwa rakaabka ah inay wax badan ka helaan safarkooda.
Koofiyaddan oo ay weheliso EPS tayo sare leh + qolofta asalka ah ee loo yaqaan 'PC shell' oo leh teknoolojiyad caaryadeed leh oo miisaankeedu aad u sareeyo. Dhanka kale, waxay ku siineysaa khibrad aad u wanaagsan oo xirasho ah. Koofiyadda la caddeeyay ee CE (EN1078) iyo heerka CPSC ee laga iibin karo adduunka oo dhan iyada oo la adeegsanayo tijaabooyin shuruud leh oo dhammaystiran sida fidsan qabow, hemi kulul iyo dhagaxa qoyan. Koofiyadda loogu talagalay qaabkeenna caadiga ah waxay u sameysan tahay waxqabad aad u fiican oo ku habboon madaxa qofka fuushan oo leh cabbir si weyn ugu habboon reer Yurub iyo Ameerika. Mashiinka Mesh-Cool-dhamaadka Sare wuxuu timaha ka dhigaa mid qalalan oo qabow inta lagu jiro fuulista, waxaan soo saarnay suufyo badan oo qalab cusub iyo tiknoolajiyad ah oo loogu talagalay ikhtiyaarrada ODM: Silicone padding, antibacterial / bamboo, PC / PP lamination and TPU seamless padding.
Suunka dib loo warshadeeyay marwalba waa himiladeenna deegaanka, waxaan sidoo kale bixinnaa ikhtiyaarro kale oo leh muuqaal milix leh, sublimation iyo silsilad silikoon on webbing ah, marka lagu daro, waxaan leenahay fursado badan oo ku habboonayn: weave midabo badan, bamboo iyo xarkaha anti-bakteeriyada.
Xiritaanka calaamadda 'ITW' oo leh walxaha 'Derlin POM' si loo hubiyo in lagu dhejiyo nabadgelyada, laguna caddeeyo haynta iyo baaritaanka is-beddelka si loo hubiyo badbaadada koofiyadda.
Iyada oo la habeeyay naqshad naqshadeynta hawo hawo leh oo leh saddex meelood oo toosin toosan, si fudud loogu hagaajiyo xiisadda hal gacan oo la siiyo tan ugu fiican ee ugu habboon uguna habboon. Suunka ku habboon ee ka soo baxa jilicsanaanta, walxaha adkeysi leh ee ilaalin fiican isla markaana si fudud ugu hagaajinaya kala-soocidda adoo beddelaya dijital caag ah. Nidaamka taam ah ee Fududeeyaha iyo beddelka ayaa bixiya hagaajinta saxda ah ee ku habboonaanta.
Hore: Koofiyad Ski iyo Carruurta V01Kid
Xiga: Duubis fara badan oo PC ah ayaa ilaaliya koofiyadda mootada magaalada VU103